Xildhibaan Jawaari: “Heshiiska doorashooyinka meel uu ka khilaafayo Dastuurka ma jirto” – Kalfadhi
September 27, 2020 September 27, 2020 Hassan Istiila
Xildhibaan Maxamed Cismaan Jawaari, Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka oo shalay ka hadlayay heshiiska siyaasadeed ee Doorashada 2020/21, ayaa sheegay in heshiiskan uusan ka hor-imaaneyn Dastuurka dalka.
Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Mudane Jawaari, oo sii caddeynayay heshiiska ayaa sheegay in meesha keliya uu wax ka taabanayo Dastuurka uu yahay qodobka 64-aad iyo 72-aad. Qodobadaasi waxaa ay sheegayaan in xildhibaannada iyo senatarada labada aqal ay ku imaanayaan doorasho toos ah oo madaxbanaan.
Waxaa la dhihi karaa duruufaha qaasbay awgeed ayaa dib loogu dhigay. Jawaari oo sii sharxayay qododo kale ayaa sheegay in Baarlamaanka hadda jira xil heytiisa uu ku egyahay marka Baarlamaanka soo socda la dhaariyo.
Ra’iisul Wasaare Rooble oo maanta xilka lagu wareejiyay kaddib munaasabad ka dhacday Mogadishu